Maraykanka oo ka hadlay duqeyntii lagu diley Maamulihii Hormuud ee Jilib – Banaadir weyne
Maamulka Hirshabeelle Oo Ka Hadlay Qaraxii Ka Dhacay Jowhar
C/kariin Guuleed oo ka digay in Cudurka Coronavirus marmarsiiyo looga dhigto dib u dhaca doorashooyinka
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukuntay Laba Eedeysane
XF Oo Baaq Ka Soo Saartay Xiisad Ka Taagan J/ Hoose
Mas’uuliyiin si kulul uga hadashay dagaal beeleedka Wanllaweyn
Maraykanka oo ka hadlay duqeyntii lagu diley Maamulihii Hormuud ee Jilib
Sarkaal sare oo ka tirsan howlgalka Mareykanka Afrika AFRICOM ayaa ka hadlay wararka sheegaya in sarkaal ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud lagu diley duqeyn ka dhacday degmada Jilib.
Sarkaalkan ayaa sheegay in aysan heyn wararka sheegaya in duqeyn shalay gelinkii dambe ay ka geysteen diyaaradahooda duulli la’aanta Degmada Jilib in ay ku dileen Madaxii Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee Degmadaasi.
Waxa uu sheegay in ay duqeynta ay isla ogaayeen Dowladda Federalka Soomaaliya, isla markaana ay bartilmaameedsadeen xubin katirsan Al-Shabaab oo uusan magaciisa iyo darajadiisa sheegin.
Hase yeeshee,Sarkaalkan ayaa sheegay in ay baari doonaan dhacdadan kadibna wixii ka soo baxa ay soo bandhigi doonaan.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa xaqiijiyay in diyaaradaha duulli la’aanta (Drones) ay duqeyn ku dileen Maxamuud Xaaji Salaad oo ah Nin wakiil uga ah Shirkadda Hormuud Laanta Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe.
Diyaaradaha Mareykanka ee duqeynta ka geysta Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxa ay Taliska AFRICOM ay sheegaan in ay ku dilaan xubno katirsan Al-Shabaab, iyaga oo ujeedka ku sheega in ay kaga hortagayaan khatar kusoo wajahan DFS, AMISOM iyo Mareykanka. – Jowhar News
Baashe: “Dadka noo yimaada ma hadli karaan”
COVID-19 oo Yurub ku dilay ku dhowaad 40 Soomaali ah
Wiil 6 jir ahaa oo Coronavirus ugu geeriyooday dalka Kenya
Khilaaf Xoogan oo ka jira xil-wareejinta xafiiska maamulka gobolka Hiiraan
NISA Oo Shaacisay Iney Talaabo Ka Qaadeyso Wariye Harun Macruuf
Ciidamada amaanka oo howlgalo amni lagu xaqiijinayo ka sameeyay Hobyo
Tegnell: Ma Aaminsani In Warbixin Darro Ay Soomaalida Hayso